गान्धीले देखाएको बाटो अनुशरण गर्न कार्यकर्तालाई देउवाको निर्देशन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गान्धीले देखाएको अहिंसाको बाटोलाई अनुशरण गरेर अघि बढन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले गान्धीले देखाएको अहिंसाको बाटोबाटै अघि बढेर मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने पनि स्पष्ट पारे ।
१५० औं गान्धी जयन्तिको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गान्धीलाई विश्वकै दूरदर्शी महान नेताको रुपमा चित्रण गर्दै उनका अहिंसावादी दर्शनले नै नेपालको पनि उन्नति हुने बताए ।
गान्धीले अहिंसाको बलमा तत्कालीन अंग्रेज शासकलाई भारतबाट हटाएर विश्वलाई नै नयाँ दर्शन दिएको सभापति देउवाको भनाइ थियो । सभापति देउवाले गान्धीलाई विश्वकै विकेन्द्रीकरणका प्रवक्ताको रुपमा पनि स्मरण गराए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गान्धीवादको प्रभाव नेपाल र विश्व राजनीतिमै परेको बताए । साथै उनले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा पनि गान्धीवादको ठूलो आशिर्वाद रहेको स्पष्ट पारे ।
कांग्रेस नेता पौडेलले गान्धीवादले विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैः होला त लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन ?
मजदुरहरुको चुल्हो बल्न छाडिसक्यो लकडाउनमा के को कर ? कांग्रेस नेता शेखर कोइराला